Akụkọ - N'afọ ndị na-adịbeghị anya, uto na ụlọ ọrụ akwa nke China nwere nwayọọ nwayọọ na ụdị ọdịnala emeela agadi ………
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, mmụba nke ụlọ ọrụ akwa na China nwere nwayọọ nwayọọ na ụdị ọdịnala emeela agadi, ebe ụdị ndị na-apụta na-abụkarị mmalite nke uto ha. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ụdị mba ụwa nwere ahụmịhe na R&D, imewe, ọwa ahịa na ọrụ ika na-eme ka mgbasawanye ha na ahịa ndị China. Na mgbakwunye na obodo nke ọkwa mbụ, ha na-abanye n'ime obodo nke abụọ na nke atọ, na-ebido asọmpi dị egwu na ụdị uwe ụlọ ma na-amanye ụlọ ọrụ uwe ịgbanwe na ọnọdụ nke ọnọdụ.
anyị chịkọtara ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ anọ mara mma, n'otu n'otu bụ:
Nke mbu, ntinye nke akwa bekee na ahia ndi China adighi ala
Ọnọdụ azụmaahịa nke imepụta ụlọ ọrụ na-emepụta uwe na China bụ nke kewara n'ime mmepụta na irere uwe na ịkpụzi uwe. Imirikiti ndị na-emepụta uwe na-emepụta uwe nke ụdị dị elu n'ọtụtụ buru ibu. Uwe a haziri ahaziri, n'aka nke ọzọ, kwesịrị ịhazi dịka ọnọdụ onye ọ bụla nke ndị na-azụ ya. A na-emepụta ya n'otu n'otu ma dabere na ahịa. Enweghị ihe egwu dị na ngwakọ, mana ogo ọrụ dị obere.
Nke abuo, E nwere uzo ato nke ulo oru nhazi ulo oru
Ka ọ dị ugbu a, a na-ekezi ụlọ ọrụ mmezi ụlọ dị iche iche ụzọ abụọ: nke mbụ, enwere ụlọ ọrụ couture ma ọ bụ ụdị ndị mmebe, ofdị uwe a dị ogologo nwere usoro mmepụta ogologo, ọnụahịa dị elu, ọnụ ahịa ndị ahịa dị elu dị elu na otu Soro ụfọdụ nke uwe ika ịzụlite omenala uwe ahịrị, tumadi maka otu ndị ahịa na obere ogbe, dịtụ obere mgbagwoju anya nke omenala ọrụ, dị ka ụlọ akwụkwọ yunifọm.
Nke atọ, Ọnọdụ mmepe nke ubi ịhazi akwa uwe China
enwe mmetụta site n'ọkwa oriri na oge mmepe dị mkpirikpi, ọ bụ ezie na ịnakwere echiche nke ịkpụzi uwe na-eji nwayọọ nwayọọ na-akawanye mma, ọ nweghị akara mba n'ọhịa nke ịme akwa akwa, na ahịa ụlọ anaghị aka tozuru oke.
N'ihe banyere ndị sonyere na ụlọ ọrụ ahụ, ụfọdụ ndị na-emepụta uwe amalitela ịbanye n'ọhịa nke ịhazi akwa nke uwe ndị mmadụ ahaziri.
Nke anọ, Nkwekọ dị n'etiti data na-eme ka ọgụgụ isi na ọgụgụ isi na-eme ihe banyere ịhazi onwe na oke.